Rudzikinuro rwaJesu—Chipo Chakakwana Chinobva Kuna Baba | Yokudzidza
Rudzikinuro—Chipo Chakakwana Chinobva Kuna Baba
“Chipo chose chakanaka uye chakakwana chinobva . . . kuna Baba.”—JAK. 1:17, Bhaibheri Dzvene muChiShona Chanhasi.
NZIYO: 148, 109
RUDZIKINURO RUNOSHANDA SEI . . .
pakutsveneswa kwezita raJehovha?
pakutonga kweUmambo hwaMwari?
pakuzadzika kwechinangwa chaMwari?
1. Rudzikinuro runoita kuti pave nemakomborero api?
CHIBAYIRO cherudzikinuro chaJesu Kristu chinoita kuti pave nemakomborero akawanda. Rudzikinuro runovhura nzira yekuti vose vanoda kururama vazovawo mumhuri yaMwari. Rudzikinuro runoitawo kuti tikwanise kuwana mukana wekuzorarama nokusingaperi tichifara. Asi rudzikinuro rwaKristu harungogumiri pakuita kuti vanhu vanoteerera Mwari vave neramangwana rakanaka. Chido chaJesu chekusvika pakufa achitsigira kururama kwaJehovha chinogadzirisa nyaya dzinokosha zvikuru kuvanhu nengirozi.—VaH. 1:8, 9.
2. (a) Ndedzipi nyaya dzinokosha kuvanhu nengirozi dzinotaurwa mumunyengetero waJesu? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.) (b) Tichakurukurei munyaya ino?
2 Makore maviri Jesu asati afa sechibayiro cherudzikinuro, akadzidzisa vadzidzi vake kuti vanyengetere vachiti: “Baba vedu vari kumatenga, zita renyu ngaritsveneswe. Umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika, sezvakunoitwa kudenga.” (Mat. 6:9, 10) Kuti tiwedzere kukoshesa rudzikinuro, ngatikurukurei kuti rwakabatana sei nekutsveneswa kwezita raMwari, kutonga kweUmambo hwaMwari uye kuzadzika kwechinangwa chaMwari.
3. Zita raJehovha rinoratidzei, uye Satani akasvibisa sei zita dzvene iroro?
3 Mumunyengetero wake wemuenzaniso Jesu akatanga kutaura nezvekutsveneswa kwezita raMwari. Zita raJehovha rinoratidza ukuru hwake, kunaka kwake neutsvene hwake. Mune mumwe munyengetero, Jesu akadana Jehovha kuti “Baba Vatsvene.” (Joh. 17:11) Sezvo Jehovha ari mutsvene, mitemo yake yose nezvose zvaanoita zvitsvene. Pasinei naizvozvo, mashoko akataurwa naSatani mumunda weEdheni anoratidza kuti akanga asingabvumi kuti Jehovha ane kodzero yekupa vanhu mitemo. Satani akasvibisa zita dzvene raMwari kuburikidza nekunyepa nezvaJehovha.—Gen. 3:1-5.
4. Jesu akatsvenesa sei zita raMwari?
4 Jesu aida chaizvo zita raJehovha. (Joh. 17:25, 26) Akaita zvose zvaaigona kuti zita raMwari ritsveneswe. (Verenga Pisarema 40:8-10.) Upenyu hwaakararama ari panyika hwakaratidza kuti mitemo yaJehovha yakarurama uye inotibatsira zvikuru. Kunyange Satani paakaita kuti Jesu afe zvinorwadza, Jesu akaramba akanyatsovimbika kuna Baba vake vekudenga. Izvi zvakaratidza kuti munhu asina chivi anogona kuramba achiita zvose zvinodiwa naMwari.
5. Zvii zvatingaitawo pakutsveneswa kwezita raMwari?
5 Tinogona kuratidza kuti tinoda zita raJehovha kuburikidza nezvatinoita. Jehovha anoda kuti tive vatsvene. (Verenga 1 Petro 1:15, 16.) Izvi zvinoreva kuti tinonamata Jehovha chete uye kuti tinoteerera mitemo yake nemwoyo wose. Kunyange patinenge tichitambudzwa, tinoita zvose zvatinogona kuti titeerere mitemo yakarurama yaMwari. Patinoita zvakarurama, tinoita kuti chiedza chedu chipenye uye izvi zvinoita kuti Jehovha arumbidzwe. (Mat. 5:14-16) Sevanhu vatsvene, tinoratidza nemararamiro atinoita kuti mitemo yaJehovha yakanaka uye kuti zvakataurwa naSatani hazvisi zvechokwadi. Tose tiri vanhu vane chivi, asi patinokanganisa tinopfidza zvechokwadi torega kuita zvinhu zvinoita kuti Jehovha azvidzwe.—Pis. 79:9.
6. Nei Jehovha achigona kutiona setakarurama kunyange zvazvo tiine chivi?
6 Jehovha anoregerera zvivi zvevaya vanotenda muchibayiro chaKristu. Vaya vanozvitsaurira kwaari anovagamuchira sevanamati vake. Jehovha anoti vakazodzwa ‘nevemamwe makwai’ vakarurama. Anoti vakazodzwa vanakomana vake uye ‘vemamwe makwai’ ishamwari dzake. (Joh. 10:16; VaR. 5:1, 2; Jak. 2:21-25) Saka kunyange iye zvino, rudzikinuro runoita kuti tikwanise kuva neushamwari hwepedyo naBaba vedu uye titsvenesewo zita ravo.
7. Rudzikinuro ruchaita kuti pave nemakomborero api pachatonga Umambo hwaMwari?
7 Mumunyengetero wake wemuenzaniso Jesu akabva azoti: “Umambo hwenyu ngahuuye.” Rudzikinuro rwakabatana papi neUmambo hwaMwari? Runoita kuti vanhu 144 000 vakwanise kusarudzwa kuti vazova madzimambo nevapristi pamwe chete naKristu kudenga. (Zvak. 5:9, 10; 14:1) Jesu pamwe chete nevaachatonga navo vanoumba Umambo hwaMwari. Pavachatonga kwemakore 1 000 vachaita kuti vanhu vanoteerera vabatsirwe nerudzikinuro. Nyika ichaitwa paradhiso uye vanhu vose vakatendeka vachange vasisina chivi zvoita kuti chikamu chekudenga chemhuri yaMwari nechepanyika zvinyatsobatana. (Zvak. 5:13; 20:6) Jesu achaparadza Satani obvisa matambudziko ose aakakonzera.—Gen. 3:15.
8. (a) Jesu akabatsira sei vadzidzi vake kuti vaone kukosha kweUmambo hwaMwari? (b) Tinoratidza sei kuti tinotsigira Umambo hwaMwari mazuva ano?
8 Paakanga ari pasi pano, Jesu akabatsira vadzidzi vake kuti vaone kukosha kweUmambo hwaMwari. Achangobva kubhabhatidzwa, Jesu akazivisa ‘mashoko akanaka eUmambo’ munzvimbo dzakawanda. (Ruka 4:43) Mumashoko ake ekupedzisira asati adzokera kudenga, Jesu akarayira vadzidzi vake kuti vazova zvapupu zvake “kusvikira kurutivi ruri kure kwazvo rwenyika.” (Mab. 1:6-8) Basa rekuparidza mashoko eUmambo raizoita kuti pasi rose vanhu vawane mukana wekudzidza nezverudzikinuro vova vanhu vanotongwa neUmambo hwaMwari. Mazuva ano, tinoratidza kuti tinotsigira Umambo kuburikidza nekubatsira hama dzaKristu dziri pasi pano pakuita basa rekuparidza mashoko akanaka eUmambo pasi rose.—Mat. 24:14; 25:40.
“KUDA KWENYU NGAKUITWE”
9. Nei tichigona kuva nechivimbo chekuti Jehovha achazadzisa chinangwa chaakasikira vanhu?
9 Jesu airevei paakazoti: “Kuda kwenyu ngakuitwe”? Jehovha ndiye Musiki. Kana akataura kuti chimwe chinhu chichaitika, chinotoitika. (Isa. 55:11) Haazombobvumiri kupanduka kwaSatani kuchitadzisa kuti chinangwa chaakasikira vanhu chizadzike. Kubvira pakutanga, Jehovha aida kuti nyika izadzwe nevana vaAdhamu naEvha vasina chivi. (Gen. 1:28) Kudai vakafa vasina vana, chinangwa chaMwari chekuti nyika izare nevana vavo chingadai chakakundikana. Saka pashure pekunge vaita chivi, Jehovha akavabvumira kuti vave nevana. Achishandisa rudzikinuro, Mwari anoita kuti vanhu vose vane kutenda vave nemukana wekurarama nokusingaperi vasina chivi. Jehovha anoda vanhu, uye anoda kuti vaya vanoteerera vararame sezvaaida.
10. Vakafa vanobatsirwa sei nerudzikinuro?
10 Ko zvakadini nemabhiriyoni evanhu vakafa vasina kumbowana mukana wekuziva uye kushumira Jehovha? Rudzikinuro runoita kuti vakafa vakwanise kumutswa. Baba vedu vekudenga vane rudo vachavamutsa vovapa mukana wekudzidza nezvechinangwa chavo uye wekuwana upenyu husingaperi. (Mab. 24:15) Jehovha anoda kuti vanhu vararame, kwete kuti vafe. Sezvo ari iye anopa upenyu, achava Baba vevanhu vose vachamutswa. (Pis. 36:9) Ndokusaka Jesu akatidzidzisa kunyengetera tichiti: “Baba vedu vari kumatenga.” (Mat. 6:9) Jehovha akapa Jesu basa rinokosha pakumutsa vakafa. (Joh. 6:40, 44) Jesu akati: “Ndini kumuka noupenyu.”—Joh. 11:25.
11. Mwari anoda kuti “boka guru” riite sei?
11 Jehovha anoda kubatsira munhu wose sezvinoratidzwa nemashoko aJesu ekuti: “Munhu wose anoita kuda kwaMwari, iyeyu ndiye munun’una wangu nehanzvadzi naamai.” (Mako 3:35) Mwari anoda kuti “boka guru” revanhu vasingaverengeki vanobva kumarudzi ose nemadzinza nendimi vave vanamati vake. Vaya vanotenda muchibayiro chaKristu uye vanoita kuda kwaMwari vanogona kuva pakati peboka revanhu rinoshevedzera richiti: “Tinowana ruponeso kuna Mwari wedu, agere pachigaro choumambo, uye kuGwayana.”—Zvak. 7:9, 10.
12. Munyengetero wemuenzaniso unobudisa sei pachena chinangwa chaJehovha nevanhu vanoteerera?
12 Jehovha ane chinangwa nevanhu vanomuteerera. Chinangwa chacho chinobudiswa pachena mumunyengetero waJesu wemuenzaniso. Maererano nemunyengetero uyu, tinofanira kuita zvose zvatinogona kuti titsvenese zita raJehovha. (Isa. 8:13) Zita raJesu rinoreva kuti “Jehovha ndiye Ruponeso,” uye kuponeswa kwatinoitwa pachishandiswa rudzikinuro kunoita kuti zita raJehovha rikudzwe. Umambo hwaMwari huchaita kuti vanhu vanoteerera vabatsirwe nerudzikinuro. Munyengetero wemuenzaniso unotipa chivimbo chekuti hapana chinotadzisa kuda kwaMwari kuti kuitwe.—Pis. 135:6; Isa. 46:9, 10.
RATIDZA KUTI UNOONGA RUDZIKINURO
13. Kubhabhatidzwa kwedu kunoratidzei?
13 Imwe nzira inokosha yatinoratidza nayo kuti tinoonga rudzikinuro ndeyekuzvitsaurira kuna Jehovha uye kubhabhatidzwa. Tinozvitsaurira nemhaka yekuti tine kutenda murudzikinuro. Kubhabhatidzwa kwedu kunoratidza kuti “tiri vaJehovha.” (VaR. 14:8) Patinobhabhatidzwa, tinenge tichikumbira Jehovha kuti atipe “hana yakanaka.” (1 Pet. 3:21) Jehovha anopindura chikumbiro ichocho kuburikidza nekushandisa ropa rechibayiro chaKristu. Saka tinonyatsovimba kuti achatipa zvose zvaakavimbisa.—VaR. 8:32.
Tinoratidza sei kuti tinoonga rudzikinuro? (Ona ndima 13, 14)
14. Nei tichirayirwa kuti tide muvakidzani wedu?
14 Ndeipi imwe nzira yatinoratidza nayo kuti tinoonga rudzikinuro? Sezvo zvose zvinoitwa naJehovha zvichibva parudo, anoda kuti vose vanomunamata varatidzewo rudo. (1 Joh. 4:8-11) Tinoratidza kuti tinoda kuva “vanakomana vaBaba [vedu] vari kumatenga” kuburikidza nekuda muvakidzani wedu. (Mat. 5:43-48) Murayiro wekuti tide muvakidzani wedu unongova pasi pemurayiro mumwe chete wekuti tinofanira kuda Jehovha. (Mat. 22:37-40) Imwe nzira inokosha yatinoratidza nayo kuti tinoda muvakidzani ndeyekuteerera murayiro wekuti tiparidze mashoko akanaka eUmambo hwaMwari. Patinoratidza kuti tinoda vanhu, tinenge tichiratidza kubwinya kwaMwari. Kuda kwatinoita Jehovha ‘kunonyatsokwana matiri’ patinoteerera murayiro wekuda vamwe, kunyanya vatinonamata navo.—1 Joh. 4:12, 20.
RUDZIKINURO RUNOUNZA MWAKA YOKUZORODZWA KUBVA KUNA JEHOVHA
15. (a) Makomborero api atinopiwa naJehovha iye zvino? (b) Makomborero api atichawana mune ramangwana?
15 Jehovha anotivimbisa kuti kana tikava nekutenda murudzikinuro zvivi zvedu ‘zvinodzimwa.’ Anogona kutiregerera zvivi zvedu zvachose. (Verenga Mabasa 3:19-21.) Sezvatambokurukura, rudzikinuro runoita kuti Jehovha akwanise kugamuchira vashumiri vake vakazodzwa sevana vake. (VaR. 8:15-17) Anokoka ‘vemamwe makwai’ kuti vave mumhuri yake yepasi pano. Pavachange vasisina chivi, pachava nemuedzo wekupedzisira. Kana vakaramba vakavimbika kuna Jehovha, achavagamuchirawo sevana vake. (VaR. 8:20, 21; Zvak. 20:7-9) Jehovha acharamba achida vana vake vose nokusingaperi. Makomborero anounzwa nerudzikinuro acharamba aripo nokusingaperi. (VaH. 9:12) Chipo cherudzikinuro chicharamba chichikosha. Hapana munhu anogona kutitorera chipo ichi.
16. Rudzikinuro runotibatsira sei kuti tinyatsosununguka?
16 Hapana zvingaitwa naDhiyabhorosi zvinotadzisa vose vanopfidza zvepachokwadi kuti vazova mumhuri yaJehovha. Jesu akauya panyika uye akafa “kamwe chete zvachose.” Saka hapana chikonzero chekuti rudzikinuro rubhadharwe zvakare. (VaH. 9:24-26) Rudzikinuro runobvisa zvachose chivi nerufu zvatakaunzirwa naAdhamu. Chibayiro chaKristu chakatisunungura kubva muuranda hwenyika ino inotongwa naSatani uye hatichararami tichitya rufu.—VaH. 2:14, 15.
17. Iwe pachako unobatsirwa sei nerudo rwaJehovha?
17 Zvakavimbiswa naMwari hazviregi kuzadzika. Kungofanana nemitemo inodzora zvinhu zvakasikwa iyo isingachinji, Jehovha haachinji. Haazombotibatisi dombo. (Mar. 3:6) Jehovha haangogumiri pakutipa chipo cheupenyu. Anotiratidza rudo rwake. “Takasvika pakuziva uye takatenda rudo urwo Mwari anarwo kwatiri. Mwari rudo.” (1 Joh. 4:16) Nyika yose ichava paradhiso inoyevedza uye vanhu vose vacharatidza rudo rwakafanana nerwaMwari. Ngatibatanei nezvisikwa zvaMwari zvakatendeka zviri kudenga tichiti: “Kurumbidzwa nokukudzwa nouchenjeri nokuonga nokuremekedzwa nesimba nemasimba ngazvive kuna Mwari wedu nokusingaperi-peri. Ameni.”—Zvak. 7:12.